Maxay Kala Yihiin Wadamada Iskandaneefiyanka ‘Scandinavian’? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan.so — October 11, 2020
Maxay Kala Yihiin Wadamada Iskandaneefiyanka 'Scandinavian?
Iskandaneefiyanka waa gobol ku yaal Waqooyiga Yurub. Wadamada Iskandaneefiyanka waa seddex boqortooyo oo kala ah Denmark, Noorway, iyo Iswiidhan. Wadamadaan waxay ugu yeereen wadamada Iskandaneefiyanka sababtoo ah jasiiradda Iskandaneefiyanka darteed.
Sababta kale ayaa ah in wadamadan ay leeyihiin xiriir taariikhi, dhaqan, iyo afeed oo adag. Ereygan sidoo kale wuxuu ka yimid gobolka Scania (sidoo kale loo yaqaan Skåne), oo ah gobolka koonfureed ee ugu hooseeya Iswiidhan. Ereyga ‘Scandinavia wuxuu soo ifbaxay dabayaaqadii qarnigii 18aad intii lagu jiray dhaq dhaqaaqii luuqadeed iyo dhaqameed ee iskandaneefiyanka.
Noorway iyo Iswiidhan waxay wadaagaan gobolka jasiiradda Iskandaneefiyanka oo dhererkiisu dhan yahay 289,500 mayl oo laba jibaaran, Danmark dhul kuma lahan Jasiiradda Iskandaneefiyaanka, laakiin waxay degtaa dhulka loo yaqaan Jasiiradda Jutland.
Danmark waxay lahaan jirtay dhulalka koonfurta Iswiidhan. Waxaa kaloo la sheegaa in dhulkii asalka uu ahaa ee Deenishka koonfurta Iswiidhan. Taasi waa sababta, sidoo kale waxay ka mid tahay waddamada Iskandaneefiyaanka xitaa haddii aysan qabsan wax dhul ah oo ka mid ah gobolka gacanka Iskandaneefiyanka.
Rasmi ahaan, ereyga “Iskandaneefiyan” waxaa loo aqoonsan yahay saddex ummadood oo keliya, halka dalalka Waqooyiga Yurub ay ka kooban yihiin aag juqraafi ah oo ballaaran.
Aan isla fiirino dhinaca juqraafi ahaan. Jasiiradda la yiraahdo Iskandaneefiyan Peninsula waxay ka kooban tahay Noorwey, Danmark, iyo Finland, laakiin ereyga wadajirka ah ee dalalkan waa “Fennoscandia” – oo badanaa lama isticmaalo.
Finland waa wadanka ugu bariga fog Jasiiradda Iskandaneefiyanka Peninsula waxayna ka go’daa kuwa kale badda Baltic’s Gulf of Bothnia.
Juqraafi ahaan wuxuu muujinayaa wadamada Iskandaneefiyanka Xigasho: Encyclopedia Britannica.
Luuqada waa waxa kale ee kala geeya wadamada Iskandaneefiyanka iyo Finland. Noorway, Deenish iyo iswiidhish dhamaantood waxay ka tirsan yihiin laanta waqooyiga Jarmalka ee luuqadaha Indo-Yurub. Finnishka, dhanka kale, kuma jiro qoyska luuqadda Indo-Yurub, laakiin waa Uralic.
Maanta, luuqadaha Indo-Yurubta-Fog ayaa laga yaabaa inay umuuqdaan inay kala duwan yihiin sida habeen iyo maalinba midba midka kale u yahay, laakiin xididdadiisa waa isku mid. Xigasho: Minna Sundberg.
Ugu dambeyntiina, Danmark kama mid aha Jasiiradda Iskandaneefiyanka laakiin waxay xiriir dhow oo taariikhi ah la leedahay labada dal ee Noorway iyo Iswiidhan, halka Finland ay in badan xiriir la lahayd dalkeeda xudduuda la wadaago ee Ruushka.
Danmark waxay dagaallo badan la gashay Iswiidhan qarniyo badan, badiyaa Noorwey.
Dalalkaan Iskandaneefiyanka ee Noorwey, Danmark, iyo Iswiidan waxay ku fadhiyaan aag ku dhowaad 750,000 oo kiiloomitir oo laba jibbaaran waqooyiga Arctic ilaa qaaradda Yurub.
Finland qayb kama ahan Iskandaneefiyanka laakiin waxaa loo tixgeliyaa juqraafi ahaan Iskandaneefiyanka. Waqti hore, waxay ka mid ahayd Boqortooyadii Iswidhishka iyadoo dadka Finnishka badankood ay ahaan jireen Iskandaneefiyanka. Laakiin finnishka ma’aha luuqad Iskandaneefiyan sidoo kale dadka reer Finland waa dad asal ahaan kala duwan.
Ugu dambeyntii, Iskandaneefiyanka waa gobol balaaran oo dhaca waqooyiga Yurub oo inta badan ka kooban Jasiiradaha Iskandaneefiyaanka. Juquraafi ahaan, Jasiiradda Iskandaneefiyanka waa jasiiradda ugu weyn Yurub, waxayna ku fadhidaa qiyaastii 289,500 mayl laba jibaaran.
Wadamada Waqooyiga Yurub ayaa si isdaba joog ah ugu jira tobanka wadan ee ugu farxada badan adduunka, waa sida ay sheegaan warbixinada Qaramada Midoobay ee Farxada Adduunka. Sannadkii 2019, afar dal oo Waqooyiga Yurub ah ayaa galay afarta boos ee ugu sarreeya.
Tags: Maxay Kala Yihiin Wadamada Iskandaneefiyanka 'Scandinavian?
Next post Qaxooti Badan oo Noorwiiji ah Ayaa Dhameeya Dugsiga Sare Marka La Barbardhigo Denmark iyo Finland
Previous post 6 Fikrado Ganacsiga Yar-yar ee Qofkasta oo Doonaya inuu Bilaabo Ganacsi